I-CDC ikhuphe isikhokelo esingxamisekileyo kwiPfizer okanye iModerna Booster Shots yamaMelika
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » I-CDC ikhuphe isikhokelo esingxamisekileyo kwiPfizer okanye iModerna Booster Shots yamaMelika
Isirinji enedosi yesitofu sokugonya sePfizer COVID-19, iboniswe ecaleni kwamakhadi okugonya, ngoMgqibelo, Matshi 13, 2021, kusuku lokuqala lokusebenza kwindawo yokugonya abantu abaninzi kwiZiko leMicimbi yeLumen Field eSeattle, edibana nentsimi apho I-NFL yebhola ekhatywayo yaseSeattle Seahawks kunye ne-MLS yebhola ekhatywayo iSeattle Sounders badlala imidlalo yabo. Indawo, eyeyona ndawo inkulu yokugonya eqhutywa ngabantu kwilizwe, iya kusebenza kuphela iintsuku ezimbalwa ngeveki de amagosa esixeko kunye namagosa afumane idosi engaphezulu yesitofu sokugonya. (Ifoto ye-AP / Ted S. Warren)
Ingcebiso esemthethweni yokuba ngubani kwaye nini ukufumana i-COVID-19 booster shot yakhululwa eMelika namhlanje ngamaZiko oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo (CDC)
Ingcebiso entsha yeCDC yeeCovid booster shots eUnited States
Namhlanje, uMlawuli we-CDC u-Rochelle P. Walensky, MD, MPH, uxhase ikomiti ye-CDC yeeNgcebiso ngeZenzo zoGonyo (i-ACIP) yengcebiso yokuphakanyiswa kwezitofu ze-COVID-19 kubantu abathile. Inkqubo ye- Ugunyaziso loKutya noLawulo lweeDrug (FDA) kunye neengcebiso zeCDC zokusetyenziswa zibalulekile amanyathelo aya phambili njengoko sisebenza ukuhlala phambili kwintsholongwane kwaye sigcina amaMelika ekhuselekile.
Kubantu abafumene iyeza lokugonya le-Pfizer-BioNTech okanye le-Moderna COVID-19, la maqela alandelayo anelungelo lokudutyulwa kwiinyanga ezi-6 okanye nangaphezulu emva koluhlu lwabo lokuqala:
I-65 iminyaka kunye nangaphezulu
Ubudala be-18 + abahlala kwi iisetingi zononophelo lwexesha elide
Ubudala be-18 + abanabo iimeko zonyango ezingaphantsi
Ubudala be-18 + abasebenza okanye abahlala kubo useto lomngcipheko ophezulu
Kubantu abaphantse babe zizigidi ezili-15 abafumene isitofu sokugonya i-Johnson & Johnson COVID-19, ii-booster shots ziyacetyiswa kwabo baneminyaka eli-18 nangaphezulu kwaye bagonywe iinyanga ezimbini nangaphezulu ezidlulileyo.
Kukho iingcebiso zokukhuthaza zonke ezintathu zokugonya ze-COVID-19 e-United States. Abantu abafanelekileyo banokukhetha ukuba leliphi iyeza lokugonya abalifumanayo njengethamo lokukhuthaza. Abanye abantu banokukhetha uhlobo lokugonya abalufumene kwasekuqaleni kunye nabanye, banokukhetha ukufumana into eyahlukileyo eyahlukileyo. Iingcebiso zeCDC ngoku ziyaluvumela olu hlobo lokuxuba kunye nokudibanisa iidosi yokutshixa.
Izigidi zabantu zisandula ukufumana ilungelo lokufumana i-booster shot kwaye ziya kuxhamla kukhuseleko olongezelelekileyo. Nangona kunjalo, isenzo sanamhlanje akufuneki siphazamise umsebenzi obalulekileyo wokuqinisekisa ukuba abantu abangagonywanga bathatha inyathelo lokuqala kwaye bafumane isitofu sokuqala se-COVID-19. Ngaphezu kwezigidi ezingama-65 zaseMelika zihlala zingagcinwanga, zizishiya-kunye nabantwana bazo, iintsapho, abathandekayo, kunye noluntu- abasesichengeni.
Idatha ekhoyo ngoku ibonisa ukuba zontathu ii Izitofu ze-COVID-19 zivunyiwe okanye zigunyazisiwe e-United States qhubeka ube esebenzayo kakhulu ekunciphiseni umngcipheko wesifo esibuhlungu, ukulaliswa esibhedlele, kunye nokufa, nkqu ngokuchasene nokusasazeka ngokubanzi Ukwahluka kweDelta. Ukugonywa kuhlala yeyona ndlela ingcono yokuzikhusela kunye nokunciphisa ukusasazeka kwentsholongwane kunye nokunceda ukuthintela iintlobo ezintsha ekubeni zivele.
Oku kulandelayo kubangelwa nguGqirha Walensky:
“Ezi ngcebiso ngomnye umzekelo wokuzinikela kwethu ekukhuseleni abantu abaninzi kangangoko kwi-COVID-19. Ubungqina bubonisa ukuba zontathu izitofu ze-COVID-19 ezigunyazisiweyo e-United States zikhuselekile-njengoko kubonisiwe ngaphezulu kwe-400 yezigidi zeedosi zokugonya esele zinikiwe. Kwaye, zonke zisebenza ngokukuko ekunciphiseni umngcipheko wesifo esibuhlungu, ukungeniswa esibhedlele, kunye nokufa, nokuba kuphakathi kwe-Delta eyahlukileyo
booster I-Booster Shot Pfizer